Cesc Fabregas oo si adag uga hadlay mustaqbalkiisa Chelsea… (Miyuu tagi doonaa mise waa uu la sii joogi doonaa Blues?) – Gool FM
Cesc Fabregas oo si adag uga hadlay mustaqbalkiisa Chelsea… (Miyuu tagi doonaa mise waa uu la sii joogi doonaa Blues?)
(London) 29 Agoosto 2016 – Laacibka khadka dhexe ee Cesc Fabregas ayaa beeniyey in macalin Antonio Conte uu u sheegay isaga inuu kooxda ka tagi karo, waxaana xiddiga reer Spain uu sheegay in si buuxda u go’aansaday inuu la sii joogo kooxda ka dheesha Premier League ee Blues.
Fabregas ayaa awoodi waayey inuu safka hore ka helo shaxda tababare Conte xilli ciyaareedkan, waxaana saddex kulan oo ay ciyaartay Chelsea Premier League ilaa iyo hadda loo magacaabay kursiga keydka, isagoo xitaa aan kursiga keydka ka soo kicin kulankii ay Sabtidii 3-0 uga adkaadeen Burnley oo marti u ahayd.
29-sano jirka xulka qaranka Spain, kaasoo ku soo bilowday kulankii EFL Cup ee ay guusha ka gaareen Bristol Rovers todobaadkii hore ayaa la la xiriirinayey inuu ka tagi doono garoonka Stamford Bridge waqtiga yar ee ka haray suuqa iibka xiddigaha, kaddib markii uu boos ka waayey safka hore ee tababaraha reer Talyaani.
Laakiin Fabregas oo isticmaalaya warbaahinta ay bulshadu ku xiriirto ayaa si adag uga hadlay mustaqbalkiisa Chelsea, waxaana uu bartiisa Twitter-ka ku soo qoray: “Waxaan lid ku ahay waxa la qoray, tababaraha iyo aniga waxaan leennahay xiriir wanaagsan, MARNA iima sheegin inaan tegi karo.
“Wuxuu ii sheegay inuu i tirsanayo, anigana waan xisaabsanayaa isaga, waxaan sii wadi doonaan inaan u dagaallamo kooxdan ilaa dhammaadka, markii la ii yeero, waxaan had iyo jeer siin doonaa waxayga ugu fiican.
“Anigu waxaan ahay mid si buuxda u go’aansaday Chelsea FC, hadafkeyguna waa inaan ka caawiyo iyaga guulo kulammo badan oo kubadda cagta ah.”
Kaddib cayaaraha heerka caalami, Fabregas iyo kooxdiisa Chelsea oo aan laga adkaan kulan Premier League ah xilli ciyaareed ayaa wajihi doona Swansea City 11 bisha soo aaddan ee September.
Claudio Ranieri: "Adduunka kuma noola wax loo dhigo N'golo Kante, haddase wuu naga tegay"